Ardayda Naafada ah - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Kulliyadaha Hore ee Colorado (CEC) waa dugsi dadweyne. CEC waxay u adeegtaa ardayda naafada ah iyo Bartayaasha Ingiriisiga waxayna siisaa adeegyo ardayda sida uu qabo sharciga gobolka iyo federaalka. CEC waxay hoos timaadaa dhammaan sharciyada federaalka iyo gobolka iyo qodobbada dastuuriga ah ee mamnuucaya takoorka ku salaysan naafanimada, jinsiyadda, caqiidada, midabka, jinsiga, nooca galmada, aqoonsiga jinsiga, muujinta jinsiga, asalka qaran, heerka guurka, diinta, abtirsiinta, ama baahida adeegyada waxbarashada gaarka ah. Sharciyada lagu dabaqi karo ardayda naafada ah waxaa ka mid ah Sharciga Waxbarashada Shaqsiyaadka Naafada ah (IDEA), Qaybta 504 ee Sharciga Dhaqancelinta ee 1973 (Qaybta 504), iyo Sharciga Naafada Ameerikaanka (ADA).
Inta badan, adeegyada uu u baahan yahay ardayga naafada ah waxaa lagu bixin karaa dugsiga ama barnaamijka CEC. Xaaladaha qaarkood, baahida gaarka ah ee ardayga waxay u baahan tahay in lagu meeleeyo meel ama barnaamij ka duwan sida ay go'aamiyeen IEP ama kooxda Qaybta 504. Sida hoos timaada IDEA, ardayda naafada ahi waxay xaq u leeyihiin Waxbarasho Dadwayne oo Bilaash ah oo Ku Haboon (FAPE) Deegaanka Xakamaynta Ugu Yar (LRE). Adeegyada uu ardaygu uga baahan yahay IDEA waxaa lagu sifeeyaa Qorshaha Waxbarashada Shakhsi ahaaneed (IEP). Marka loo eego sharciga Colorado, bixinta FAPE iyo adeegyada gaarka ah ee uu u baahan yahay IEP ardaygu waa mas'uuliyadda wadajirka ah ee CEC iyo Colorado Charter School Institute, oggolaanshaha CEC.
Ardayda codsanaysa ka qayb galka CEC loogama baahna inay aqoonsadaan inay haystaan ​​IEP-da CEC-dana way aqbashaa ardayda iyada oo aan tixgelinayn naafonimada ardayga.
Ka dib markii ardayga IEP uu markii hore ku diiwaangashan yahay CEC, kulanka kooxda IEP ayaa laga yaabaa in loo baahdo si loo go'aamiyo in goobta dugsiga CEC ama barnaamijka la rabo uu yahay meeleyn ku habboon ardayga oo ku saleysan baahidooda. Inta badan, adeegyada uu u baahan yahay IEP-ga ardaygu waxa lagu bixin karaa CEC. Xaaladaha qaarkood, baahida gaarka ah ee ardayga waxay u baahan tahay in lagu meeleeyo meel ama barnaamij kale.